War Deg Deg Ah: Maamulka Puntland Oo La Sheegay Inay Ciidamo Usoo Direen Gobolka Sool Iyo Deegaano Kamida Bariga Sanaag Iyo Ciidamada Qaranka Oo Difaac Adag Ku Jira - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Maamulka Puntland Oo La Sheegay Inay Ciidamo Usoo...
Warar naga soo gaadhaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in shalay galinkii danbe ay maamulka Puntland ciidamo usoo direen deegaanada gobolka sool iyo waliba deegaano sanaag bari ka tirsan.
Waxaana ciidamadani xalay sida naloo sheegay mar qudha lagu war helay iyagoo dhex maraya degmada xudun oo dhanka waqooyi ka xigta degmada laascanood iyo waliba deegaano kale oo gobolka sool ka tirsan.Sidoo kalena waxay maamulkani sida naloo sheegay ay ciidamo u direen deegaanada bariga gobolka sanaag ee diiwaangalintu ka socoto.
Ciidamada qaranka Somaliland ayaa iyagu difaac adag ku jira tan iyo markii dhawaan weerar gaadmo ah ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland xarun ciidan oo ay ciidamada qaranku ku leeyihiin deegaanada bariga sanaag, iyada oo halkaasina ay labada ciidan dagaal ku dhex maray.
Ciidamada qaranka Somaliland ayaa sida naloo sheegay wali gacanta ku haya 8 maxbuus oo askar ah oo uu ku jiro nin xildhibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland iyo 3 gaadhi oo kuwa dagaalka ah.
Maamulka Puntland ayaa iyagu waxay wadaan qorshayaaal ay damacsan yihiin inay ku carqaladeeyaan diiwaangalinta codbixiyayaasha ee ka socota gobolka sool iyo waliba diiwangalinta la filayo inay dhawaan ka bilaabmato gobolka sool.
Dhanka kale waxa laga cabsi qabaa in mar kale dagaal dhex maro ciidamada qaranka Somaliland iyo kuwa maamulka Puntland.
Somalia: Madfac 6 Qof Oo Hal Qoys Ah Ku Dilay Marka